Yakagadzirirwa Kuratidzira Chimwe Chinhu Kunze Kwechinyakare | Martech Zone
Yakagadzirirwa kuratidza chimwe chinhu kunze kweakajairwa
Chipiri, April 13, 2010 Mugovera, June 27, 2015 Douglas Karr
Vana vangu vanogara vachindiseka nekuda kwerudo rwangu rwemafirimu ane hupenyu - ini handingakwanise kuwana zvakakwana kwavari. Sezvo ini ndaive ndakatarisa Madagascar 2, ndakada chiitiko ichi apo mwenje mutsvuku unotanga kubhenekera nekudzima… tarisa mabatirwo acho nemapenguin ari pagumbo:
Zvakanyanya kushata kuti maAnalytics haagare aine mwenje tsvuku inopenya "yakagadzirirwa kuratidza chimwe chinhu kubva pane zvakajairika" pamwe nemanyowani ekuti ungazvigadzirisa sei. Ehezve - kunyangwe dai vakadaro - chero ndege yaive ichingobhururuka, vangangosarudza kuita chero chinhu.
Masangano akaomeswawo nenhamba dziri kukura (sezvandiri ini!). Dambudziko nderekuti pane zvakajairwa nyaya mukati mehuwandu dzinofanirwa kunge dzichipenya mabhuru matsvuku. Iri ibasa rako seMarketer kuti uvawane… pamwe kudonha kwakakosha mumataurirwo emazwi, kana saiti inoreva iyo inobuda pasina kwainosvika.
Iyo yepedyo yatinowana kune yekushandisa izano rinoenderera revanhu senge Avinash Kaushik uye analytics maitiro akanakisa mablog. Ndeapi marambi matsvuku awakafukunura (kana kufuratira) mune yako Analytics?
Zvichida iwe unofanirwa kuita chimwe chinhu nezvazvo ndege isati yadzika! Kana iwe unowana yako Analytics Reports "yakanaka uye yakati rebei"?
Tags: AnalyticsMadhagasikabhatani dzvuku
Nei uye Sei Kunyoresa uye Tora DUNS Nhamba
Kanganwa Blackberry Kubudirira, Multi-Tasking Inokunda